Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Madaxwaynaha DDS oo tariikhdu xusi doonto, isbadalka uu ka sameeyeey deegaanka Soomalida.WQ Abdirizak Budul
Madaxwaynaha DDS oo tariikhdu xusi doonto, isbadalka uu ka sameeyeey deegaanka Soomalida.WQ Abdirizak Budul
December 8, 2011 - Written by xaajo - Edited byxaajo
Ilaa iyo Maalintii uu qabtay Hogaanka amaanka degaanka soomalida Ethiopia, iyo hada oo uu madaxwayne ka yahay deegaanka somaalida Abdi Maxamud Cumar waxaan indhaheena ku arki karnaa isbadal dheer. Markaan dib u eegno madaxdii Abdi Maxamud Cumar ka horaysay, waxay caan ku ahaayeen qabyaalada, musuq maasuqa, iyo karti laan. Madaxawaynayaashii ka horeeyay Abdi Mahamud wax muuqda oo ay qabteen la ma garan karo, waxayna waqtigoodii ku dhamaysan jireen is qabqabsi. Wax shaqo ah degaanka lagama qaban jirin intii ka horaysay madaxwayne Abdi Maxamud Cumar.
Marka aan eegno inta uu xilka qabtay Mudane Abdi Mahamud Cumar, wuxuu keenay maskax tii hore ka duwan oo ah in nin walba oo masuul lala xisaabtamo, lagulana xisaabtamo shaqadiisa. Waxaa jiri jirtay intii ka horeysay Madaxwayne Abdi in Madaxda sagaalka gobol ee deegaanka aynan daafi jirin JIGJIGA oo aynan tagi jirin meeshii ay madaxda ka ahaayeen, shaqo ay qabtaan iska daaye. Xaakumada hada taas way badashay gudoomiye walba, iyo wasiir walba wuxuu ka shaqaqeeyaa howshii iyo shaqadiisii shacabku ka sugayay. Shaqsi walba oo deegaanka ka shaqeeya waa la la xisaabtamaa. Taas waxay keeni kartaa horumar dag dag ah, waana mid lagu faano. Taasna waxaa keenay Mudane Abdi Mahamud Cumar.
Waxaa kale oo wadankii ka hirgalay dib udhisid badan iyo maalgashi farabadan oo ah kii soo mara deegaanka. Waxaa khaastan kamuuqda dismayaal cusub oo indhaha lagu diirsan karo. Waxaa kale oo kajira in ay kusii qulqulayaan qurbajoog tii u dhalatay deegaanka oo fahmay in wadankoodii hooyo uu u baahanyahay horumar. Waxa uu madaxwaynaha amar ku bixiyay in la dadajiyo horumarka deegaanka damaantiis. Maanta waxaa jira, Jidadka dhaa dheer ee isku xidha JigJiga iyo Dhagaxbuur iyo Qabdahar Iyo Goday iyo Wardheer. Waxaa iskaga gala gooshinaya baabuurta noocyadooda ka kala duwan sida caasiyada, busaska, iyo gaadiidka kale. Waa ilaahay mahadii. Waxaa kale oo ka hirgalay deegaank inta uu Abdi Maxamud Cumar talada qabtay inaad diyaarada waqtiga aad doonto uraaci karto JigJiga, Qabdahar, Goday oo maalin walba la helo. Waan in lagu diirsado isbadalka ka jira wadankii hooyo oo aan horey uga jiri jirin. Waxaa kale oo sii dheer in meelo farabadan insha allahu mar dhow lagaga hadli doona telephoonka gacanta (mobileka) oo gaari doono meel kasta oo ka mida deegaanka.
Madaxwayne Abdi Mahamud Cumar Wuxuu noqday madaxwaynihii ugu horeeyay ee qurba joogta u dhalatay deegaanka gacanta ugalayay taladii deegaanka oo wafti uu hogaaminayo kuyimid dibadaha dhowr jeer. Waxaa uu furay albaabka qurb joogta oo wixii asaga ka horeeyay xirnaa. Abdi Maxamud Cumar waxaa uu badalay fikirkii siyaasadeed ee qurba joogta udhalatay deegaanka oo ka dhaadhiciyay in ay xor u yihiin wadankoodii hooyo oo aan awal ku ekayd oo kaliy deegaanka oo kaliya. Wuxuu caalamka tusay in deegaanka soomalidu uu yahay deegaanka lamaalgashan karo, lagu noolaan karo. Midaas isbadalka siyaasadeed waxay keentay in caalamku soo booqdo deegaanka sida hayadaha caalimiga, dowladaha, safaaradaha, siyaasiyiinta, khaastan safiirka maraykanku uu booqasho ku tagay jigjiga ilaa iyo Goday oo indhiisa kusoo arkay isbadalka kajira deegaanka. Mida Jaaliyaadka, waxay balanqaadeen oo usheegeen in ay madaxwaynaha iyo dhamaan xukuumadiisa in ay hiil iyo hooba la hortaagan yihiin kuna noqonayaan wadankii sida u dhaqsaha badan oo aan aragno hada.
Madaxwayne Abdi Maxamud Cumar waxa uu wax ka badalay dhinica xuduuda deegaanka uu lawadaago Jumuuriyada Somaliya taas oo markii hore iska dayacnayd oo cidii rabta ay iska soo galin jirtay waxa ay doonta. Maanta taasu majirto, xuduudada deegaanka waxaa hantayay wiilal udhashay deegaanka oo layiraahdo ciidaamada qaranka LIYUU BOOLISKA. Run ahaantiina, wax ka badashay nabadgaliyada deegaaanka. Waxaa intaa sii dheer, oo uu badalay Madaxwayne Abdi Mahamud Cumar qaabka ay Ethiopia ula shaqayn jirtay gabolada dariska Punland iyo Soomaliland oo markii wax walba oo ay deegaanka ka rabaan wax ka way diin jiray Federaalka balse manta ay marayaan dowlada deegaanka. Waxaa kale oo la odhan karaa Abdi Mahamud Cumar waxa uu dhinica tariikhda deegaanka ka galay durba meel aad u saraysa mudo laba sano gudahood ah. Wuxuu kala shaqeeyayay ururadii naba ku dhawaaqay oo kala shaqeeyay in deegaanka lagu soo dabaalo nabad waarta. Mida kale waxaan horey u dhicin in ciidankii ONLF ee ladagaalamayay Ethiopia iyo degaanka ay manta ka shaqaynayaan horumarka iyo nabadgalada deegaanka. Dhinicyada kale ee loogu mahad celin doonu madaxwayne Abdi Mahumud Cumar waxay noqon doonaan ciidamada qaranka ee LIYUU BOOLISKA oo uu hirgalay oo manta hantiyay nabadgalayada deegaanka kana difaacaya codowga.
Ugu danbayntii waxaa jira oo uu hirgalayay Madaxwaynaha Deegaanka Somalida Ethiopia Abdi Mahamud Cumar oo uu soo magacaaabay lix Qunsul oo uu leeyahay deegaanka una fidhin doona saafarada Ethiopia oo aan horay u jirin. Midaas marka waxay kuu xaqiijinaysaa in uu la damacsanyahay deegaanka wax aad uga sii balaaran tan uu hada qabtay.
by UDSE SANDIEGO